Windows ကို 10 activati​​on သော့ချက် NEW Tool ကိုတရားဝင်
Windows ကို 10 activati​​on သော့ချက် – တာဝန်ရှိသူတဦးက Activator
Morehacks အသင်းထံမှကောင်းသတင်း! ငါတို့သည်သင်တို့သစ်ကို Windows ကို run ချင်သည်သိရ 10 သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာသင်တို့မူကားတစ်ဦးလိုင်စင်ကိုဝယ်ချင်ကြဘူး. ယခုငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်း Windows ကို 10 activati​​on သော့ချက်! ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဆော့ဖ်ဝဲမှဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း Windows ကို 10 Activator, အရာ Windows အတွက်သော့ကိုထုတ်ပေး 10 အရမ်းလွယ်ကူတဲ့. ငါတို့ရှိသမျှသည်အာမခံ generated လိုင်စင်များမှာ 100% အလုပ်လုပ်ကိုင်. သင်ကလုံးဝစစ်မှန်သော Windows ကို run ပါလိမ့်မယ် 10.
သင်က Windows ရှိပါက 7/8/8.1 သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်က Windows ကသင့် system ကို update လုပ်နိုင် 10, ဒါပေမယ့်သင်ကတူအင်္ဂါရပ်များကိုဖွင့်အားလုံးခံစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်: updates များ, ပြတင်းပေါက်များ 10 မီဒီယာစင်တာ, Microsoft Office 10 နှင့်အများကြီးပို. သင်က Windows ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လိုင်စင်ကိုဝယ်ခိုင်းပါလိမ့်မည် 10 ၎င်း၏အပြည့်အဝအာဏာမှာ. ယခု, ဒီ Windows ကို 10 activati​​on သော့ချက် Generator ကို သင်က Windows ကိုသက်ဝင်နိုင် 10 အရမ်းလွယ်ကူတဲ့! ကျနော်တို့ဒီ tool ကိုစုံစမ်းပြီကြောင့်သေချာစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့. အောက်တွင်သင်က Windows ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည် 10:
1. ဒေါင်းလုပ် Windows ကို 10 product Key ကို Tool ကို
2. ဖွင့်လှစ် Settings ကို, နှင့်အပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ / ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Windows ကို activated မထားဘူး. ယခု Windows ကို Activate လုပ်ပါ.
3. Click / စကိုထိပုတ်ပါ key ကိုရိုက်ထည့် ကြယ်သီး. ဒါဟာအောက်ဖော်ပြပါဒိုးကိုဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်
4. အဆိုပါဖွင့်လှစ် Windows ကို 10 product Key ကို Tool ကို နှင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ cd-key ကို copy
5. သင်ကူးယူကြမယ်ဆိုရင် 24 ဂဏန်း code တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်, အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်းပေါ်လာသင့်ပါတယ်
6. ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ”နောက်တစ်ခု” အချိန်အနည်းငယ်ခလုတ်နဲ့စောင့်ဆိုင်း. အရာအားလုံး ok င့်လိုလျှင်, အောက်တွင်အနေဝင်းဒိုးပေါ်လာသင့်ပါတယ်
7. အခုတော့ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့နှင့်ပျော်မွေ့ Windows ကို 10 စစ်မှန်သည့်
ဒါကြောင့်, သင့်အဘို့အဘယ်သို့သောစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? Windows အယခု Download 10 activati​​on သော့ချက် Tool ကိုနဲ့ Windows ပျော်မွေ့ 10!